Ahoana no ahazoana tombony azo amin'ny marika tsy filalaovana gaming | Martech Zone
Alakamisy, Jona 24, 2021 Alakamisy, Jona 24, 2021 Polina Haryacha
Nanjary sarotra ny tsy niraharaha ireo mpanafatra filalaovana, na dia ho an'ny marika tsy kilalao aza. Mety hafahafa izany, ka andao hazavao ny antony.
Indostria maro no nijaly noho ny Covid, saingy nipoaka ny filalaovana horonantsary. Vinavinaina ny sandany mihoatra ny 200 miliara dolara amin'ny 2023, fitomboana ateraky ny tombatombana 2.9 miliara gamer manerantany in 2021.
Tatitry ny tsenan'ny lalao eran-tany
Tsy ny isa ihany no mahaliana an'ireo marika tsy lalao, fa ny tontolo iainana isan-karazany manodidina ny lalao. Ny fahasamihafana dia miteraka fotoana hanehoana ny marikao amin'ny fomba isan-karazany sy hahatratrarana ny mpihaino sahirana nataonao. Ny lalao video livestreamer dia laharana ho iray amin'ny asan'ny nofinofin'ankizy, antenaina ny tsena mivantana mahatratra 920.3 tapitrisa olona tamin'ny 2024. Ny fiakaran'ny esports dia manan-danja ihany koa; antenaina hahatratra 577.2 tapitrisa tamin'io taona io ihany.
Miaraka amin'ny 40% ny lanjan'ireo haino aman-jery atosiky ny marika tsy filalaovana, marketing amin'ny mpilalao dia tsy azo ihodivirana. Ny tombony voalohany dia tena ilaina mba hianarana sy hahatakarana ny varotra lalao alohan'ny mpifaninana aminao. Saingy aloha, mila takatrao tsara hoe toa inona ny filalaovana amin'ny 2021.
Nanazava ny mpijery lalao
Mety hieritreritra ianao fa anjakan'ny zatovo zatovo manana fotoana malalaka tsy voafetra ny filalaovana - saingy tsy lavitra ny fahamarinana izany. 83% ny vehivavy ary 88% ny lehilahy azo sokajiana ho gamer. Ary na dia tena kilalao aza izany no malaza indrindra amin'ny tanora, 71% amin'ireo 55-64 taona ihany koa no milalao. Raha ny toerana misy azy dia global ny lalao. 45% amin'ireo Danes no milaza fa milalao lalao vs. 82% an'ny Thai, fa ny toekarena lehibe indrindra manerantany dia tsy miova fananana fifamatorana matanjaka, izay tena ilaina amin'ny mpivarotra. Ny tombotsoan'ny lalao sy ny safidiny dia miovaova ihany koa amin'ny dingam-piainana, foko ary fironana ara-nofo.
Miaraka amin'ity haavo isan-karazany amin'ny filalaovana ity dia mazava fa tsy mitana ny stereotazy nentim-paharazana. Fa amin'ny fomba ahoana no mahasoa an'ity marika tsy filalaovana ity? Midika izany fa azonao antoka ny mahita influencer lalao izay mety voajanahary ho anao.
Ny lanjan'ireo mpanafika kilalao amin'ny marika tsy kilalao
Mazava ho azy fa ireo mpanafatra lalao dia manazava ny indostria sy - ny kolontsaina kilalao. Ny mpijery azy ireo dia mpankafy maty tokoa, mirotsaka an-tsehatra ary rakotra toy izany koa amin'ny lalao rehetra. Digital ny lalao; mpanjifa mavitrika, mpanjifa haino aman-jery sarotra. Ny tetika fampielezankevitra izay niasa taminao araka ny fomban-drazana dia mety tsy mandeha eto, indrindra raha tsy manamboatra azy ireo ianao. Resak'i Twitch na YouTube, tsy Fahitalavitra na haino aman-jery sosialy. Ny fanaovana dokam-barotra amin'ny lalao dia tokony hisy dikany ara-kolontsaina raha tsy ampanalavirinao ny mpihaino anao, ary ny influencer dia fomba lavorary hampiroboroboana ny marikao amin'ny fomba tsy miangatra.
Inona no azonao idirana amin'ny fiarahana miasa amin'ny influencer lalao? Mpihaino marobe izay mety tsy ho hita any an-toeran-kafa indrindra amin'ny ambaratonga mitovy. Ny renirano twitch dia matetika mandritra ny ora maro, miaraka amin'ny endri-chat mivantana ahafahany mifandray tsy tapaka eo amin'ny streamer sy ny mpihaino. Tonga ny YouTube Gaming 100 lavitrisa ora fiambenana amin'ny taona 2020, isa saika tsy takatry ny saina. Saingy tsy ny habeny daholo akory.
Izy io dia ny maha-azo itokiana ireo filalaovana lalao izay mihaino ny mpihaino azy, mamorona fifandraisana efa niasa mafy. Tamin'ny volana septambra 2020, nahita ny taha ambony indrindra 9% avy amin'ny influencer nano (1,000-10,000). Mega influencers (mpanaraka 1 tapitrisa na mihoatra) no manana ny taha ambony indrindra 5.24%, milaza fa na dia ny olo-malaza amin'ny lalao aza dia afaka mibaiko ny sain'ny mpihaino tsy tapaka. Mahatsiaro tena misy amin'ny olona ny atiny filokana, ary ny fitaovana natoraly toy ny resaka Twitch dia natao hanamafisana izany.
Ahoana no ahafahan'ny marika iaraha-miasa amin'ny Influencers Gaming
Misy fomba isan-karazany amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanafika lalao. Ireto ambany ireto ny fomba voalohany atolotray ireo marika tsy filalaovana.
Fampidirana tohanan'ny - Ny fanamarihana marika dia fiantsoana tsara ny vokatrao na serivisinao tafiditra ao anaty atin'ny fitaomana. Cloutboost dia nanao fampielezan-kevitra ho an'ny Hotspot Shield VPN mba hampitomboana ny fahafantarana ny marika sy handroahana ny fampidinana ny vokatra, ho fanohanana ireo mpanafika Twitch. Ity twitch sponsorship ity dia nisy fampitana ny tolona nataon'izy ireo tamin'ny famahana ny vokatra, ary koa ny firesahana ny tombotsoan'ny vokatra amin'ny ankapobeny. Nasongadin'ilay mpamatsy vola ny fanomezana, ny fampidirana ny Hotspot Shield amin'ny sora-baventy sy logo, ary ny fiantsoana hetsika chatbot mahazatra.
Ny marika VPN mpifaninana iray, NordVPN, dia mifantoka betsaka amin'ny marketing influencer — amin'ny ankapobeny amin'ny YouTube. Hahita ny marika misy azy ireo ianao manerana ny sehatry ny lalao, manomboka amin'ny influencer lalao kely kokoa ka hatramin'ny PewDiePie. NordVPN dia manantitrantitra ny tombontsoa maharitra an'ny YouTube; ny mpijery dia hijery horonan-tsary efa amam-bolana na taona maro talohan'izay satria ny algorithm sy ny sehatr'asan'ny mpampiasa dia tsy mifantoka amin'ny fampidirana vaovao fotsiny. Raha ampitahaina, ny sehatra toa ny Twitch sy Instagram dia mifantoka amin'ny atiny ankehitriny.
LG dia mampiseho ohatra iray hafa amin'ny marika tsy filalaovana mikendry gamer. Ny orinasa dia manana tantaram-piaraha-miasa amin'ny lalao YouTubers, manasongadina ny fomba LG TV dia mety ho safidy tsara ho an'ny mpilalao. Daz Games namorona an Lahatsary tohanan'ny LG izay manolotra ny vokatra amin'ny fomba voajanahary, manome ohatra tsara amin'ny fomba ahafahan'ny marika tsy filalaovana lalao manala fampidirina tena izy ary mahatratra mpihaino vaovao.
Fanomezana Influencer - Ny fanomezana dia fomba tsara foana hamoronana fifamatorana manodidina ny marikao. KFC dia niara-niasa tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny Twitch streamers hanolotra fanomezana ho an'ny mpijery ho an'ny varotra marika sy karatra fanomezana rehefa nandresy lalao izy ireo. Ireo mpampiasa niditra tamin'ny alàlan'ny fanoratana emote KFC (Emoticons spésifik manokana) ao amin'ny chat Twitch, ary ny loka dia namboarina namboarina mifanaraka amin'ny lalao nilalao. Ny fananana ny marikao hamoaka vokatra namboarina ho an'ny lalao dia fomba tsara fampidirana azy io.
Hetsika lalao - Nampiasain'i Hershey ny iray amin'ireo hetsika fanao isan-taona lehibe indrindra, TwitchCon 2018, hatramin'ny hampiroborobo ny bar sôkôla Reese's Pieces vaovao. Hatramin'ny nitondran'ny TwitchCon ireo mpandeha lehibe indrindra amin'ny sehatra ambanin'ny tafo iray, dia nanohana an'i Ninja sy DrLupo i Hershey ho an'ny mivantana mivantana. Io fampahavitrihana io dia nanararaotra ny fotoana tsy manam-paharoa amin'ny fidirana mivantana amin'ireo streamer miaraka aminy, miaraka amin'ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny hevitra hoe Ninja sy DrLupo ho duo mahatalanjona — toa an'i Hershey sy Reese's.
Raha heverinao fa lavitra ny lalao ny marikao, aza mitady lavitra noho ny MAC Cosmetics hahazoana aingam-panahy. Nanohana ny TwitchCon ny MAC tamin'ny taona 2019, fizarana fanomezana, fanomezana serivisy fampiharana fampiharana makiazy, ary fitadiavana fahombiazana vehivavy streamers toy ny Pokimane hilalao lalao eny amin'ny booth-ny. MAC SVP Philippe Pinatel dia nanantitrantitra ny fomba famporisihan'ny Twitch ny maha-olona sy ny fanehoan-tena ao amin'ny fiarahamonina misy azy, ireo fiasa izay mamaritra ny MAC ho marika iray.
Esports - Esports dia sehatry ny lalao matihanina izay ahafahan'ny marika mandray anjara. Niara-niasa tamin'ny fikambanana esports matihanina i Aldi sy i Lidl mba hanohana jirofo sy hamorona atiny amin'ny alàlan'ny activations iraisana. Aldi sy ny Team Vitality dia niara-niasa tamin'ny fampiroboroboana ny hafatra ifotoran'ny marika Aldi momba ny maha-zava-dehibe ny sakafo ara-pahasalamana, amin'ny fatotra izany amin'ny fikarohana maharitra an'i Vitality ho an'ny fampisehoana.
Mihaona sy miarahaba - Toy ny hetsika amin'ny lalao, ny fihaonana sy ny fiarahabana dia manolotra fomba iray hampiasana ny influencer lalao ivelan'ny tontolo nomerika. Jereo, ohatra, Fihaonana sy fiarahaban'i Shroud ao amin'ny Zumiez. Ny fifandraisan'ny olona miaraka amin'ireo mpamorona lalao premiere dia mamorona lanja lehibe ary mampivondrona vondron'olona voatokana.
Ny tratry ny lalao
Ny indostrian'ny lalao dia tsy ilay vondrona zara raha misy azy taloha fotsiny. Ny lalao dia manerantany, ary maneho mpankafy legiona amin'ny sokajin-taona, lahy sy vavy ary foko io. Na dia tsy tafiditra mahagaga aza ny marika filalaovana amin'ny varotra lalao, misy ny fotoana lehibe ahazoan'ny marika tsy filalaovana tombony ny mpihaino mbola tsy voatanisa.
Ny influencer lalao dia maneho ny fomba miavaka hijerena ireo mpihaino lalao. Misy fomba isan-karazany hahazoana famoronana ary hiteraka fahatsiarovan-tena sy varotra manodidina ny marikao. Aza adino ny mitadidy ao an-tsaina fa Gamers dia mpanjifa be pitsiny. Zava-dehibe ny fampielezan-kevitra amin'ny lalao influencer ho an'ny indostria sy ireo mpanafatra voafantina voafantina.
Tags: cloutboostdaz lalaodrlupoesportsvehivavy mahatratravarotra lalaoinfluencer lalaovarotra influencer lalaofampidirana lalaoHersheyhery miasa manginaKFClgLiveStreamlalao mivantanaNinjanordvpnreesesfampidirana tohanan'nytwitchtwitter streamerstwitchconYouTubeLalao YouTubezumies
Polina Haryacha dia mpanorina ao CloutBoost, masoivohom-barotra iray mifantoka amin'ny data, mifamatotra amin'ny fividianana marika izay mampivondrona marika miaraka amin'ireo mpilalao mitovy hevitra aminy. Miaraka amin'ny traikefa efa am-polony taona mahery amin'ny varotra vokatra, fahazoana ny mpampiasa ary famakafakana marketing, Polina dia manam-pahaizana malaza asongadina ao amin'ny TechCrunch, AdExchanger, Adweek, ary ireo haino aman-jery indostrialy hafa. Izy koa dia mpandahateny amin'ny fivarotana fivarotana nomerika ambony, ao anatin'izany ny Digital Summit sy PubCon, izay nizara ny fahaizany amin'ny fandefasana sy fampiroboroboana ny lalao finday, PC, ary console.